Maqaal: Qorshaha hub ka dhigista maleeshiyada ee Muqdisho Waa mid aan laga fiirsan – Balcad.com Teyteyleey
Qorshaha hub ka dhigista militiada ee Muqdisho waxu u muuqdaa mid laab la kac ah oo aan wanaagsan loo daraaseen ama looga fikirin.
Hub ka dhigis macquul ma ahan iyadoo arimahaan aan la xalin
(1) Alshabaab wali awood ku leeyihiin Muqdisho ama Somalia
(2) Dib u heshiisiin buuxda aa la sameeyn
(3) Dastuurka aan la dhameeystirin
(4) Heyadaha Cadaalada aan la tayeeyn
(5) Heyadaha amniga sida police ka, NISA iyo SNA aan did u habeen lagu sameeyn.
(6) SNA oo aan xeerooyin rasmi ah loo sameeyn lana diiwaan gelin si loo xakameeyo.
(7) maleeshiyaadka hubeeysan laftooda waa in qorshe hub ka dhigis, dhaqan celin iyo xirfad eey ku shaqeeystaan loo abuuraa si eey u helaan nolol aan qori ku xerneyn.
(8) Hub ka dhigistu waa ineey ku saleeysnaataa habka United Nation ka
(9) Ganacsatada, Heyadaha iyo shaqsiyaadka amnigooda u baqaya waa in loo diiwaan geliyaa hubkooda si eey anmigooda u sugtaan.
Qoriga soo dhiib aan qofka amnigiisa la sugi karin
Qormadii: Mohamed Mukhtar
A peacekeeper kneeling in front of recovered weapons.
UN Police officers completing a successful weapons recovery operation.
Dowladda Sacuudiga oo Howlo Afurin ah ka bilaabaya Soomaaliya